Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Shelton Hotel New York Points the Way of the Future
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Shelton Hotel New York Points the Way of the Future
Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụlọ nkwari akụ Shelton
Obere ụlọ elu ole masịrị dị ka 1924 Shelton Hotel na Lexington Avenue na 49th Street, ugbu a New York Marriott East Side.
Ndị nkatọ kwenyere na ọmarịcha ihu ụlọ ya nwere ọmarịcha ụlọ 35 na ụdị ndọghachi azụ pụrụ iche tụrụ aka ụzọ ọdịnihu maka ụlọ elu.
Ọ bụ onye nrụpụta nnukwu ụlọ James T. Lee wuru Shelton, onye bụkwa onye na -ahụ maka ụlọ ụlọ okomoko abụọ: 998 Fifth Avenue nke 1912 na 740 Park Avenue nke 1930.
Ọ bụ nna nna Jacqueline Kennedy Onassis, amụrụ Jacqueline Lee Bouvier.
Ọhụụ Maazị Lee bụ ụlọ nkwari akụ nwere ọnụ ụlọ 1,200 nwere ụdị klọb: ebe igwu mmiri, ogige squash, ụlọ billiard, solarium na ụlọ ọgwụ. Akwụkwọ akụkọ New York World na 1923 kwuru na Shelton ga -abụ ụlọ kacha ogologo n'ụwa.
Onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, Arthur Loomis Harmon, jiri brik na-acha odo odo na-acha odo odo kpuchie ya, dị ka ọ dị ọtụtụ narị afọ, wee si na Romanesque, Byzantine, Christian oge mbụ, Lombard na ụdị ndị ọzọ. Mana ndị nkatọ masịrị ya nke ukwuu na ọ chetara "enweghị ụdị ụkpụrụ ụlọ n'oge gara aga," dịka onye na -ese ihe bụ Hugh Ferriss tinyere ya na Christian Science Monitor na 1923.
Shelton bụ otu n'ime ụlọ izizi were ụdị ya site na iwu mpaghara 1916 nke chọrọ ndọghachi azụ n'ogo ụfọdụ iji hụ na ọkụ na ikuku na -aga n'okporo ụzọ. Nke ahụ mere ka ọ dị iche na nnukwu ụlọ nkwojiaka toro ogologo e mere tupu mgbanwe mpaghara, dị ka 1919 Hotel Pennsylvania, na -abụghị ọdụ Pennsylvania.
Helen Bullitt Lowry na William Carter Halbert kwuru na The New York Times na 1924. Onye nkatọ Lewis Mumford, na-enwekarị otuto, kpọrọ ya "ọmarịcha, mkpanaka, dị jụụ, dị ka Zeppelin n'okpuru okpuru ulo. mbara igwe dị ọcha ”na magazin Commonweal na 1926.
Otú ọ dị, atụmatụ ọhụụ nwere oke ya, na ime ụlọ Mr. Harmon yiri ka ọ dịtụghị iche na nnukwu ụlọ oriri na ọ otherụ hotelsụ ndị ọzọ nke oge ahụ: nnukwu ụlọ ezumike, ụlọ iri nri nke nwere okpokoro a kpụrụ akpụ na ogologo paseeji nwere oghere. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ime ụlọ nwere ịsa ahụ, nke ga-abụrịrị na ọ nwere nsogbu na ngwụsị 1924, mgbe Shelton tụgharịrị iwu nke naanị ụmụ nwoke. Nnukwu ụlọ ngosi gbara gburugburu ọdọ mmiri dị n'okpuru ala, nke ejiri polychromed tile chọọ ya mma.
Site na 1925 ruo 1929, Georgia O'Keeffe binyere di ya, onye na -ese foto Alfred Stieglitz na 30th nke Shelton Hotel. Ewezuga ekweghị na nkwari akụ Chelsea, ọ siri ike iche maka ọzọ New York City ụlọ nkwari akụ nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ onye na -ese ihe, ọkachasị ụlọ nkwari akụ nke ị na -anụbeghị.
N'elu okporo ụzọ Lexington n'etiti okporo ụzọ 48 na 49, a na-eto ụlọ nkwari akụ Shelton nke nwere ọnụ ụlọ 31 dị ka ụlọ elu kachasị elu n'ụwa mgbe emepere ya na 1,200. Ọ bụghị naanị na ọ toro ogologo, ọ bụ ụkọ-ụlọ nkwari akụ mara mma nke obibi maka ụmụ nwoke nwere bọọlụ bowling, tebụl billiard, ogige squash, ụlọ ahịa ịkpụ isi na ebe igwu mmiri.
Ihe anaghị enwe obi abụọ bụ ihe ụkpụrụ ụlọ ahụ pụtara. Site na ntọala okwute nzu nke nwere ọmarịcha ụlọ na ndọghachi azụ brik atọ na-agbago elu ụlọ elu, Shelton na-agbada. Ndị nkatọ lere ya anya dị ka ụlọ izizi nwere ihe ịga nke ọma na 1916 chọrọ mpaghara nke chọrọ ndọghachi azụ iji gbochie skyscrapers ka ọ ghara ịbụ anya na -emegharị anya.
Ọchịchị Alaeze Ukwu bụ naanị otu n'ime ụlọ Shelton nwere mmetụta. Ka ọ na -erule 1977, onye nkatọ ihe owuwu New York Times Ada Louse Huxtable kwupụtara ụlọ nkwari akụ ahụ "nnukwu ụlọ elu New York."
O'Keeffe enweghị ike ịrịọ maka ụlọ studio dị mma karịa. Site n'ụlọ ndina ya, ọ na -enwe ọ andụ na -enweghị atụ, anya nnụnụ na -ele osimiri ahụ na ihe ọkụkụ ụlọ na -eto n'ime obodo. Dị ka Charles Demuth, Charles Sheeler na ndị ọzọ na-ese ihe nke oge ya, O'Keeffe nwere mmasị na skyscrapers dị ka ihe nnọchianya nke ime obodo mepere emepe, ụkpụrụ bụ isi nke Precisionism, ụdị nka nka ọgbara ọhụrụ na-esote World War I nke na-eme emume ọhụụ ọhụrụ nke America. , ụlọ mmepụta ihe na ụlọ elu.
N'ịkwado na Shelton perch ya, O'Keeffe kere opekata mpe eserese 25 na eserese nke elu igwe na ihu obodo. Otu n'ime ihe kacha mara amara bụ "Radiator Building - Night, New York," ememme mara mma nke mystique skyscraper - yana akara ngosi ojii na ọla edo American Radiator Building ugbu a aha ya bụ Bryant Park Hotel.
Arthur Loomis Harmon, onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke Shelton, gara n'ihu nyere aka chepụta ụlọ ala eze. (Ọ mekwara Allerton House, nnukwu ụlọ nkwari akụ New York nke 1916).
Mana ama ama Shelton gbagburu elu elu mgbe onye na -ese ihe mgbapụ Harry Houdini gara ọdọ mmiri ọdọ mmiri na 1926. Akara ya n'igbe ikuku, dị ka igbe ozu (n'agbanyeghị na ekwentị nwere ya ma ọ bụrụ na ihe mberede emee), a gbadara Houdini n'ime ọdọ mmiri ebe ọ mikpuru mmiri otu awa na ọkara. Ọ pụtara na nhazi oge, ike gwụrụ ya mana ọ dị ndụ. "Onye ọ bụla nwere ike ime ya," ka ọ gwara The New York Times.
N'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme na ọmarịcha ihe owuwu ụlọ, The Shelton, dị ka ọ dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ oriri na nkwari akụ niile merela agadi enweghị ihu ọma. Enwere naanị mmadụ 11 bi oge niile n'etiti afọ 1970. Na 1978 ọ ghọrọ Halloran nke ihe amachibidoro. Ọ goro Stephen B. Jacobs ka ọ rụzigharị ime ime ụlọ, belata ọnụ ọgụgụ ụlọ ahụ ruo 650.
Site na 2007 ọ bụ Morgan Stanley bụ onye nyefere ọrụ n'aka ụlọ ọrụ Marriott.
Ụlọ ọrụ ihe owuwu ụlọ na injinịa Superstructures nwere nnukwu mkpọsa nke nrụzi nke mpụga. Richard Moses, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ na-ahụ maka ọrụ ahụ, na-ekwu na nkọwa nke elu Harmon, gụnyere isi, nkpuchi, griffins na gargoyles, adịchaghị mma, n'agbanyeghị na edochila ọtụtụ ihe ndị ihe ọkụkụ kụrụ.
Maazị Moses kwuru na Maazị Harmon mere ka mgbidi ya dọọ ntakịrị, iji nye Shelton ike. Mmetụta ya, nke a na -amatachaghị nke ọma, pụtara na ọkwa ala.
Ime ụlọ mbụ nke ụlọ nkwari akụ 1924 gbadara ruo iberibe, dị ka ọnụ ụlọ steepụ dị n'aka nri nke nnukwu ọnụ ụlọ. Ụlọikpe skwọsh adịghịzi; nọ n'ọnọdụ ha bụ ụlọ mmega ahụ na ala 35th nke nwere nlele dị egwu gburugburu. Ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ akpọwo aha ụlọ dị ka Arthur Loomis Harmon, Alfred Stieglitz na Georgia O'Keeffe.